Umbuzo Cessna U 206 G de Rikoooo
unyaka 1 5 edlule #1121 by CL38
Angikwazi ukuqala i-Cessna U206G kusukela kuCold and Dark.
- I-Fuel tank khetha: Konke
- I-Fuell: ivulekile
- Ukulawulwa kwe-Propeller: 100%
- Ukushintsha ibhetri: ku
-Qala ukuhamba nge-swich: ku-
Umsebenzisi alandelayo (s) wathi Thank You: Roypcox
unyaka 1 4 edlule #1142 by I-Camwin128
Uma ungaphakathi FSX. Cindezela u-Ctrl + E ukuze uqalise injini. Ukulungiswa okusheshayo.
unyaka 1 4 edlule #1171 by CL38
Siyabonga ngolwazi lwakho kodwa kuyinkqubo yezincwadi ezibizwa ngokuthi iCold and Dark that I search.
I-CTRL + E ingenye yemigomo eyisisekelo ye FSX futhi P3D.